UMarketerHire: Apho Ungaqesha khona Isikethi esizimeleyo esiSebenzayo | Martech Zone
UMarketerHire: Apho Ungaqesha khona Isikethi esizimeleyo esiSetyenzisiweyo
NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Lo nyaka ube ngumceli mngeni kwimibutho emininzi. Ngaphandle kokuba yi-anecdotal, iindlela ezintathu endizibonayo zezi:
Inguqu Digital -Ujoliso lwangaphambili kumava abathengi bangaphandle lutshintshile lwangaphakathi kunye nokudibana nemibutho emikhulu njengoko benciphisa abasebenzi kunye nenkcitho.
Amaqela akude -Ngenxa yotshintsho ekusebenzeni ekhaya ngexesha lobhubhane, iinkampani ziye zatshintsha umbono wazo ekusebenzeni ekhaya kwaye zivulelekile ekusebenzisaneni njengeqela.
Iikontraki ezizimeleyo -Iinkampani ezinkulu zandisa abasebenzi babo abasisigxina ngesivumelwano kunye nabathengisi abaselunxwemeni. Ukusuka kwi "CMO for Hire" ukuya kubayili bemizobo… iikontraki ziba yinxalenye ebalulekileyo kuyo yonke inkampani.
Ukufumana phi i-Freelancers yeNtengiso
Ngelixa kukho inani elikhulu leendawo ezikwi-intanethi ukufumana italente, zimbalwa izibonelelo ezinceda ekuhlolweni nasekulawuleni italente oyenzayo. Kananjalo uninzi lweenkonzo zifuna ukugaywa ngokubanzi kunye nexesha lesivumelwano kunye neefizi zokupheliswa ngaphandle kwamaxabiso okusilela.
KwiMarketerHire yinkonzo yokuqesha italente esele ichaziwe ukuze umbutho wakho wongeze umthengisi oqinisekisiweyo kwiqela lakho kwisithuba esingaphantsi kweveki! Banikezela ngemirhumo yokuqesha ephantsi, akukho ntlawulo yokupheliswa, kwaye baneqondo eliphantsi kakhulu lokusilela ekuqeshweni ngeyure, ngokungesosigxina, okanye ngezixhobo ezisisigxina.
Njani kwiMarketerHire Vets Abathengisi
IMarketerHire inenkqubo yovavanyo lwe-freelancer engqongqo kwaye bayazithengisa ngokwabo- ke bajonge iingcali eziqinisekisiweyo ngomnqweno kunye nokuqhuba. Amakhulu abathengisi basebenza inyanga nenyanga, kodwa KwiMarketerHire uqesha kuphela ngaphantsi kweepesenti ezintlanu. Bona:
Gaya abaSebenzi abaPhezulu -Babeka esweni amaqela e-Facebook, iiforamu kunye ne-LinkedIn yokuchonga nokuqinisekisa italente.
Ukujongwa kwakhona kwezakhono ezinzulu -Baphonononga amava obuchule, ingxelo yabathengi, kunye neesampulu zomsebenzi kunye novavanyo oluthile lwezakhono.
Udliwanondlebe lweVidiyo -Ukuvavanya izakhono zonxibelelwano, ukucinga nzulu, kunye nobungcali.
Iiprojekthi zovavanyo -Emva kokwamkelwa, abaviwa babelwe iprojekthi yovavanyo kunye nemeko yokwenyani yomhlaba ukubonisa ubuchule, ubuchule, ubungcali kunye nokuthembeka.
Ukuqhubela phambili Ukusebenza kuyajongwa kunye nabaxumi rhoqo kwiiveki ezi-2 ukuqinisekisa inkonzo esemgangathweni kunye nonxibelelwano.
Uya kudibana nomphathi wentengiso kuyo yonke inkqubo. Baza kuxoxa ngeprojekthi yakho kunye nawe, bancede baqonde into oyifunayo, kwaye bakufanise kunye nomthengisi. Emva kokuba uqeshise ukuqala kwakho, baya kujonga ukuqinisekisa ukuba imigangatho yethu ephezulu iyafezekiswa.
Inkqubo ye KwiMarketerHire iyakhawuleza kwaye ayinamthungo:
Chaza iprojekthi yakho - Xelela uMarketerHire malunga neprojekthi yakho. Ngaba ujonge ingcali yejelo elinye okanye ukwakha iqela lamajelo amaninzi? UMarketerHire uya kucwangcisa umnxeba kunye nawe ukuze ufunde okungakumbi malunga neprojekthi yakho kwaye ufumane ukuqonda okungcono kweemfuno zakho ngqo.
Dibana nomthengisi wakho ogqibeleleyo -Ukuba umphathi wakho wentengiso uyayiqonda iprojekthi yakho, baya kukhangela inethiwekhi yabathengisi ukuze bafumane umdlalo omkhulu. Baxelele ukuba uyamthanda umthengisi ocetyiswayo kwaye siza kucwangcisa umnxeba wokwazisa ukuze ukwazi ukudibana nabo kwaye ujonge iprojekthi. Ukuba awuqinisekanga malunga ne-freelancer, baya kuseta ii-intros ezininzi.
Qalisa iprojekthi yakho -Kwamsinya nje ukuba wamkele umthengisi wakho, baya kuba bekulungele ukukhaba iprojekthi kwaye badibanise neqela lakho. Umphathi wakho uya kungena rhoqo kwiiveki ezimbini. Ukuba nangasiphi na isizathu awonwabanga ngumthengisi wakho, baya kukudibanisa nomnye omtsha.
Akukho kuposwa kwemisebenzi, akukho dliwanondlebe, akukho ntloko… zama KwiMarketerHire namhlanje. Iindima ezikhoyo zibandakanya abathengisi beAmazon, abathengisi bohlobo lweentengiso, iiNtloko zeNtengiso, amagosa ezentengiso, abathengisi be-imeyile, abathengisi bokukhula, abathengisi be-SEO, abathengisi bokukhangela abahlawulwayo, abathengisi beendaba zentlalo, kunye nabathengisi beendaba zentlalo abahlawulwayo.
Ukuqesha Abathengisi Faka isicelo njenge-Freelancer
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam KwiMarketerHire ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: Abathengisi abazimeleyoeyentengisoAbathengisiabathengisi abazimeleyoukuthengisa abakhangeli abahlawulwayoukuthengisa abathengisi beendaba zentlalohlawula ngokokucofa abathengisiintengiso yemidiya yoluntuabathengisi bezokuzonwabisa
Ungalwenza njani uPhicotho lwe-SEO olupheleleyo